Starting Your Personality Development
အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ကြမည့်သူများ၊ လူငယ်လူရွယ်များ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Faculties : U Aung Naing Maw
လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ စေရန် ကျင့်သုံးသင့်သည့် အကြောင်းအရာများကို ပို့ချပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြား ပို့ချချက်များကို လေ့လာခြင်း အားဖြင့် တစ်ဦးချင်း၏ ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ထားရှိကျင့်သုံးသင့်သည့် နည်းလမ်းများကို လေ့လာသိရှိခွင့်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြု မည် ဖြစ်ပါသည်။
6 Video(s), 1 Reading(s) Quiz
Personality Development (ANM)
01. Personality Development and Habits
02. Seven Habits Of Highly Effective People
03. Habits - 1, Be Proactive (Part - 1)
04. Be Proactive ( Part - 2)
05. Habit - 2, Begin With The End In Mind
06. Habit - 3, Put First Things First